Vashandisi veApple Watch vane 34% vanoshanda zvakanyanya | Ndinobva mac
Sezvo Apple yakatanga chizvarwa chekutanga cheApple Watch, vazhinji vedu tanga tiri vashandisi vakamanikidzwa kufamba, nekuda kwebasa iro awa rega, anotiyeuchidza kuti tinofanira kusimuka uye kutambanudza makumbo, chero bedzi mudziyo waona kuti hatina.
Sekureva kweinishuwarenzi John Hancock, vashandisi vanoshandisa iyo Apple Watch, ivo vane 34% vanoshingaira kupfuura avo vasina iyo. Ichi chidzidzo chakaitwa kuburikidza nedata rakawanikwa kubva kuvanhu vanopfuura mazana mana ezviuru kubva kuUnited States, Europe neAfrica rinotiratidza kuti kurudziro inofanirwa kufamba nekutambanudza makumbo inopihwa sei neApple Watch.
Uye zvakare, ivo vashandisi vakapinda muongororo iyi, vimbisa izvozvo wakawedzera huwandu hwemazuva ne31% vanoita chero mhando yekurovedza muviri, kunyangwe iri kungofamba kwehafu yeawa kana awa. 52% yeavo vakaongororwa vanosimbisa kuti ivo vakawedzera mazuva ekuwedzera kwekuita basa.
Kubva 2016, iyo inishuwarenzi yanga ichipa vatengi vayo Apple Watch, kuti kana vakwanisa kuzadzisa zvinangwa, zvinongovabhadharira madhora makumi maviri nemashanu. Kutenda kuchirongwa ichi kubva kukambani yeinishuwarenzi yaJohn Hancock, urikutora mwero wevashandisi vane huwandu hwakakwira hwemafuta emuviri vakatanga kudonha zvakanyanya.
Mukufamba kwenguva, chirongwa ichi chinobvumidza inishuwarenzi kuchengetedza mari yakawanda se vane hutano varidzi vako vemitemo, iyo shoma mari yauchazoshandisa pane yako ekurapa mabhiri. Nekuburitswa kwechidzidzo chayo chazvino, inishuwarenzi yatangawo kupa Apple Watch Series 4 kune vese vatengi vayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Vashandisi veApple Watch vane 34% vanoshanda zvakanyanya
Skena QR kodhi neako Mac kamera nekutenda kuQR Journal